ABWAAN!! Qushi Murtida Haw odhan, Ha Qurux-tirin Qiimaha Abwaannimo!! | Somaliland.Org
ABWAAN!! Qushi Murtida Haw odhan, Ha Qurux-tirin Qiimaha Abwaannimo!!
December 22, 2012	Qaraf iyo Tixaha Gabay Ku Qadhaabo Ha u Baran!!! By Eng. Hussein Adan Igeh (Hussein Deyr)(UK)
Rabbi Naxariistiisa Janno ha ka waraabiyee, Abwaankii weynaa ee caanka ahaa ee reer Somaliland Maxamed Xaashi Dhamac “Gaarriye”, ayaa mar uu ka hadlayey Gabayaaga iyo kaalintiisa bulsho waxa uu curiyey maanso ay tixaheeda ka mid ahaayeen kuwan hoos ku qoran:
Wallee “qaaf” ujeedo leh
Ku qadhaabo uma baran;
Quudhkaygu muu gelin.
Wallee gabay ma qurux tiro!
ALLOOW kuu naxariiso, Sidoo kale mar uu Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac “Gaarriye” ka hadlayey xumaanta, dhibta iyo mashaakilka ay QABYAALADDU leedahay, maansadisii “Dugsi Ma Leh Qabyaaladi” waxaa ka mid ahaa tixeheeda kuwan:
Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac “Gaarriye”(AHUN), maansadiisii ERGO waxa uu ku yidhi:
Inkasta oo aan jeclaan lahaa, haddana ma ahi Abwaan, Hal-abuur, Muti-maal iyo Suugaaan-yahan midnaba. Waxaan aaminsanahay in Abwaannimada iyo Hal-abuurnimaduba yihiin hibo iyo deeq Rabbi bixiyo oo uu ku gallado qofkii uu doono! Maqaalkan kooban waxaan keliya is leeyahay aragtidayda gaaban ku cabbir sida aan u arko xilka iyo masuuliyadda Abwaanka saaran iyo sida uu sumcaddiisa iyo milgihiisaba isagu isugu hayo ee ay gacantiisa ugu jiraan, taasoo ku xidhan suugaanta uu curiyo iyo eray-murtiyeedka afkiisa ka soo baxa. Waxa kale oo aan jecelahay inaan wax yar hoga-tusaaleeyo una caqli celiyo abwaano da’yar oo iyagu is-mahadiyey, hibada iyo deeqda Hal-abuurnimo ee ALLAH siiyeyna u haysta hub iyo aalad lagu adeegto, qofka masuulka ah lagu af-lagaadeeyo, bulshadana la iskaga hor keeno.
Abwaanku waxa uu ka mid yahay hal-doorka bulshada ugu mudan ee aad loogu qadariyo kaalinta uu kaga jiro bulshada dhexdeeda. Abwaanku waxa saaran masuuliyad iyo xil-bulsho oo aanay cidi u igman, balse ay bulshadu kula xisaabtanto kuna qiimayso kolba ma-hadhada ay suugaantiisu reebto iyo saamaynta ay erey-murtiyeedkiisu ku leeyihiin bulshada iyo kolba sida uu wixii danta guud ee bulshadiisa ugu adeegaya isugu hawlo. Magaca, sumcadda iyo karaamada uu Abwaanku bulshadiisa ku dhex leeyahay kuma xidhna hayntiisa iyo waxa uu maal haysto, aqoontiisa, qoyska ama qabiilka uu ka soo jeedo, dabeecaddiisa iyo dad la-dhaqankiisa, iwm. Balse waxay ku xidhantahay miisaanka iyo muhimmadda ay murtidiisu leedahay, farriinta ay suugaantiisu xambaarsan tahay iyo saamaynta ay weedhiisu ku leedahay bulshada uu ka soo jeedo.
Hal-abuurnimadu waa hibo ALLAH bixiyo. Sidoo kale magaca Abwaan maaha degrii dugsi iyo jaamacado laga qaato, ee waa maamuus iyo magac-sharafeed ay bulshadu bixiso oo ay ku sharafto hal-abuurkii mutaysta ee u qalma. Bal iyaba waa cibaaree, waqtigan xaadirka ah waxaa badan rag iyagu, iyagoon mutaysan oo aanay bulshadu u garan magac-sharafeedka ABWAAN, iyagu sacabka isu tumaya iskuna magacaabaya Abwaan Hebel!
Haddaba, Abwaanku waa kii dhexdhexaad ah ee ka fog kana feyow caadifadda, qabyaaladda, nacaybka shakhsiyadeed, gobolaysi, iwm. Waa kii garan kara ee miisaami kara muhimadda iyo miisaanka ay leedahay Hal-abuurnumadu isla markaana qiyaasi kara saamaynta ay suugaantiisu ku yeelan karto bulshada uu ku abtirsado iyo ciddii kale ee ay dhaqan iyo af-ba wadaagaan.
Abwaanka magaciisa iyo milgihiisaba dhawranayaa, bulshadiisa oo dhammi qiimo ayey la leedahay (qof yar, qof weyn, rag, haween, sheikh, faqiir, taajir, masuul-qaran, iwm). Qajeelaa loo soo joogay nin hal-abuurnimo sheegtay oo intuu erayo aafo, aano iyo eexba wata ummadda dhex dhigay dabadeedna magac- xumo taransaday. AFKII aan SHALAY kugu AMMAANAY, HADDII aan MAANTA KUGUMA CAAYO, waxaan caddeeyey inaan ag-maray asluubtii Abwaannimo, bulshada ayaana iska leh go’aanka iyo qiimaynta abwaannimadaada!!
Abwaanka waa kuma (? ):
Qof ahaan waxaan aaminsanahay in Abwaanku yahay Tusaale iyo Tilmaan Bulsho oo lagu soo hirto, isla markaana uu bulshada oo dhan dhex-dhexaad u yahay. 1	Abwaanku waa kii suugaantiisa iyo hal-abuurnimadiisa ku kasbada quluubta iyo maanka bulsho aan xad lahayn, isla markaana soo jiita qofkii ay kala aragti iyo ujeedoba duwan yihiin.
2	Abwaanku waa kii, suugaantiisa iyo maansooyinkiisaba bulshada ku baraarujiya wanaagga iyo asluubta suuban. Abwaanku waa kii ereygiisu ummadda mideeyo ee bulshada ka dhex abuura walaalnimo iyo wada-noolaansho dhab ah.
3	Abwaanka magciisa iyo milgihiisaba dhawranayaa waa kii ka gudba xayn-daabka iyo xuduudaha qoys, qabiil, tuulo, degmo iyo gobol. Waa kii ay maansooyinkiisa iyo murtidiisaba ka muuqdaan xushmad iyo qadarin uu u hayo cidda uu la hadlayo, waxa uu ka hadlayo iyo ciddii dani ka gasho amaba ay dood-wadaag leeyihiin.
4	Abwaanku waa kii suugaantiisa ku kala saara saxa iyo qaladka, ka garaaba wixii xaqa ah, diida xumaanta, xaqdarrada iyo dulmiga, ka xishooda wixii magaciisa, ka dalkiisa iyo bulshadiisaba dheg xumo u soo jiidi kara.
Previous PostGolaha Deegaanka Baki Oo Doortay Maayar Iyo Maayar Ku xigeen CusubNext PostGudoomiyaha W. Awdal Oo Dhagax Dhigay Dhisme Laga Hirgalinayo Dugsiga Sare Ee Sh. Cali Jawhar	Blog